RW Rooble oo sheegay inuu qaatay Siyaasad Arrimo Dibadeed Cusub oo ku dhisan... - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. RW Rooble oo sheegay inuu qaatay Siyaasad Arrimo Dibadeed Cusub oo ku dhisan... - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
RW Rooble oo sheegay inuu qaatay Siyaasad Arrimo Dibadeed Cusub oo ku dhisan…
Ssuuragal ma aha inay Soomaaliya colaadiso dalal ay kala dhexeeyaan dano badan.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble oo maanta guddoomiyay Shirka Toddobaadlaha ahaa ee Golaha Wasiirrada oo looga halady arrimo kala duwwan.
Rooble ayaa ka warbixiyay heshiiskii Golaha Wadatashiga Qaran ee dhammeystirka doorashooyinka Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in xukuumadda iyo dhammaan dhinacyada ay ka go’an tahay in ay Doorashadu ku dhammaato xilligii lagu heshiiyay.
Previous articleXOG: Maxaa lagu helay Wasiirka Ganacsiga? (Heshiis uu la wareegay iyo Baaritaan lagu bilaabay)
Next articleMadaxweynaha Puntland oo xilkii ka qaaday Guddoomiyihii Gobolka Bari , mid cusubna magacaabay